Maxaabiista Xabsiga Garowe oo kulan Kubadda cagta la yeeshay Koox ka socotay Garoonka Classic “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Magaaladda Garowe ee caasimadda Dowlad goboleedka Puntland waxaa ka dhacday cayaar kubadda Cagta oo dhex martay Koox matalaysay Maxaabiis ku xiran Xabsiga Dhexe ee Garowe iyo Koox ka socotay Garoonka Classic Stadium ee Magaaladda Garowe.
Cayaartan oo ka dhacday Xabsiga dhexdiisa ayay ahayd mid ugub ah oo labada dhinac ay ku soo bandhigeen cayaar aad loo jecleystay ayaa waxa ay guushu ku raacday Kooxdii ka socotay Garoonka Classic, iyagoo uga badiyay Kooxda Maxaabiista Xabsiga Garowe 5 iyo 4 Gool.
“Kooxda ka socotay Garoonka Classic waxay ahaayeen koox adag oo muddo cayaarayay Kubadda cagta, laakiinse kooxdii magaca maxaabiistu waxay soo bandhigeen cayaar qurux badan” ayuu yiri Axmed Jowle oo Hoggaaminayay Teamka Classic Stadium.
“Runtii aad bay ugu farxeen in la kulmaan, la ciyaarayaan, la sheekaystaan Maxaabiistii nala ciyaaraysay iyo kuwii daawanayay” ayuu sii raaciyay Axmed Jowle.
Kulankan kubadda cagta ah ee dhexmaray Labadan kooxood ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee Maxaabiis ku xiran Xabsi ku yaal deegaanada Puntland ay la ciyaaraan kooxo ka socotay bannaanka Xabsiga, waxaana soo qabanqaabiyay Mulkiilaha Garoonka Classic Studium ee Magaaladda Garowe Axmed Jowle.
Dhanka kale ganacsade Axmed Jowle, waxaa uu Maxaabiista u hadyeeyay Neef Geel ah oo loo qalay Maxaabiista ku xiran Xabsiga Garowe iyo Kooxdii la Ciyaartay.
Kulankan waxaa ka qaybgalay Mas’uuliyiin ka socotay Taliska Ciidanka Asluubta iyo Masuuliyin kale oo ka socotay Dowlad goboleedka Puntland, waxayna dhammaantood uga mahadnaqeen Ganacsatada Axmed Jowle Deeqda uu soo gaarsiiyay iyo kulanka Kubadda cagta ah ee ay la yeesheen Maxaabiista.